APPLE KALA DUWAN BRYANSKY: SHARAXAAD IYO SAWIR, QAABABKA BEERASHADA IYO SIFOOYINKA - BEERTA
Geedka tufaaxa ee Bryansky wuxuu muujinayaa heerka badbaadada wanaagsan iyo difaac sare.
Geed geedeedka Bryansk ayaa soo dhaweeyay dadweynaha adkaysiga qaboobaha iyo difaaca jidhka.
Kala duwanaantu way kala duwan tahay Qiyaasta sare iyo heerka badbaadada wanaagsan.
Sharaxaad ka mid ah noocyada tufaaxa ee tufaaxa Bryansk, qaababka beerashada iyo daryeelka, sawirada midhaha iyo waxyaabo kale oo badan - ka dib.
Apple kala duwan Bryansk ayaa loola jeedaa horaantii xilliga qaboobaha.
Wuxuu siinayaa dalagga oo ku haboon inuu ururiyo dhamaadka Sebtembar-bilowgii October.
Naf-dhiska midhaha miro ayaa sarreeya, tufaaxa waa la ilaaliyaa oo ku habboon isticmaalka. illaa February.
Makhiika lagu taliyey in lagu daro qolalka iyo qolalka hoose.
MUHIIM: Haddii meesha kaydinta aan laga helin qabowga, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diiriyo, tan iyo tufaaxu waxay bilaabi kartaa in lafilayo heerkul hoose inta lagu jiro kuleylka.
Noocyada jiilaalka waxaa ka mid ah: Idared, Golden Delicious, Pear Winter, Fuji iyo Rozhdestvenskoe.
Kala duwan Bryansk uma baahna pollination khasab ahawood u leh midho keli ah. Haddii aad go'aansato inaad dhirto geedo kale, waxaa lagu talinayaa in lagu daro oo leh noocyo qaboobaha.
Qeexitaan kala duwan Bryansky
Noocyada dhirta iyo dhirta Bryansk sredneroslaya, miraha cabbirka dhexdhexaad ah. Ka fikir wax badan.
Apple Bryansk wuxuu loola jeedaa noocyada ay leeyihiin celceliska celceliska, waxay ku kala duwan yihiin xawaaraha dhismaha garbaha iyo krone.
Tajid la sameeyay ayaa leh qaab qaabaysan. Caleenta Cufnaanta dhexdhexaadka ah. Laantu waa ay kor u kacdaa, waayo badi badani waa la maqan yahay.
Jilbiska on laanta yar yar waa siman, oo leh qarxan cagaaran. Laamuhu waxay ku koraan xagal hoose.
Caleemaha waa weyn, waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, cidhifyadu waxay si fiican u dareerayaan qoyaan, caarada yaryar.
Xajka caleen waa flat, meelaha wax yar wax xoqin, burooyinkeeda waqtiga koriinkedu waa conical, ka cararaya.
Miraha noocyo tufaax ah Bryansk kala duwan weyn ama mid dhexdhexaad ahGuud ahaan waa tiro qiyaastii 150 garaam. Xaaladaha qaarkood wuxuu gaaraa 300 garaam.
Tufaaxu waxay leeyihiin qaab isku dhafan, hal-cabbir ayaa ka adkaata, qabsashada daciifka ah. On maqaarka ee tufaaxa leeyahay gaboobin casaan, laakiin midabka ugu weyn waa cagaaran iftiin.
Dusha sare ee miro waa siman, wuxuu leeyahay shinni dhalaalaya. Isugeynta cufan dhexdhexaad ah iyo midab cad, dhadhan macaan oo macaan. Midhaha waa mid casiir leh oo udgoon.
Noocyo fiican oo miro ah ayaa sidoo kale ku faani kara noocyo kala duwan: Abriil, Aphrodite, Aport, Orlik iyo Screen.
Dhexdhexaad ah oo ku yaal magaalada Bryansk. Breeder A.I. Astakhov foomka iskudhafka ah ee SR0523 iyo fasalka Guuleystaha.
Markaad ka gudubto, waxay rabeen inay helaan noocyo kala duwan oo aaney ku koobnayn oo keliya xaaladaha aadka u qabow, laakiin sidoo kale inay qolof ka soo baxaan. Shaqada waa la dhammeeyey.
DIYAARIN: Waxyaabaha kala duwan ee geedaha tufaaxa Bryansk waa difaaca cudurada ugu caansan ee geedo midho leh - qolof.
Goobta dhalashada iyo qaybinta
Dhexdhexaad ayaa si fiican loo qabtaa dhulka Bashiiriya, Koonfurta Ural iyo gobolka Ryazan, si guul leh u soo martay qaar ka mid ah qaboobaha ugu qabow. Ilaa hadda, noocyada kala duwan ayaa ku faafay ee Russia, Belarus, Ukraine.
Goobahaas, noocyada tufaaxan soo socda ayaa si guul leh u koraya: Augustus, Antonovka caadiga, Granny Smith, Jonathan iyo Aport.
Kala duwanaantu way kala duwan tahay dhalaanka iyo korodhka dhalmada. Midhaha ugu horeysa ee isticmaali kara, waxay siisaa Sannadka 3aad ee nolosha.
Waxay kala duwanaanaysaa noocyo kale. badi, xajmiga dalagyada sanadlaha ah. Marka geedku soo galo awood buuxda, dhalidda geedo lagu beeray hektar waa: laga bilaabo 270 illaa 350 meter / ha.
Tayada sare ee suuq-geynta ee miro-siinta waxay siisaa iibin wanaagsan, ka sokow, miraha si fudud ayaa loo qaadaa waxaana, ku xiran xaaladaha lagama maarmaanka ah, waxaa la keydiyaa ilaa February.
Waxyaabaha sareeya waxay kaloo kala duwan yihiin noocyo kala duwan: Venyaminovsky, Vityaz, Dessert Petrova, Elena iyo Imrus.
Beeridda noocyo tufaax ah Bryansk sameeyey heerka, sida noocyada kale.
MUHIIM: Xulo seedling geed-tufaax leh garab siman iyo, haddii ay suurtagal tahay, iyada oo aan lahayn xididada ka badan oo la qalajiyey. Fasaxyo leh caleemo iyo xididdo qallalan, qaado xidid iyo koraan ka sii dar.
Markaad dooranaysid goobta beeritaanka, iska ilaali kuwa hooska ah ee hooska dhirta kale. In nidaamka koritaanka apple illaa heerkulka sare ee loo baahan yahay.
Si loo baabi'iyo suurtogalnimada jeexista geedka dabaysha dabaysha, dooro meesha ay tahay xagal yar.
Masaafada ka timaada dhirta kale ee tufaaxa waa inay noqotaa ilaa afar mitir.
Qufac for beeritaanka waa in laga buuxiyo bacriminta. Qiyaasaha lagu taliyey: 1 baaldi of humus, 1 kg oo bacriminta macdanta, 700 g of ash.
Bacriminta waa isku dhafan yahay oo hoos udhigay lakabyada godadka beerta.
Marka la beero, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in xididadu ay hoos u socdaan, ujeedkana waa tuugo yar yar oo dhoobo ah oo lagu abuuray ceelka, taas oo ah geedo la yareeyo "meel".
MUHIIM: Haddii xididdadu ay kor u kacaan, geedku ma awoodi doono inuu cuno si sax ah, waxaana jiraya fursad uu ku gubi karo.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo dhulka si tartiib tartiib ah, daaha lakabka. Hubso in qoorta geedku uu furan yahay, haddii kale waxaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu bilaabo.
Gooyo. Koritaanka geedku waa inuu ahaadaa mid dabiici ah horraanta gu'ga.
Gooyo adoo u diraya awoodda geedka si aad u kareyso.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in laga reebo kuwa laamaha kuwaas oo weli ku hari gabayaa, ka dib markii ay ka saareen geedka tufaaxa ayaa kori doona cusub, caleemaha dhalinyarada. Si weyn u xoqaya waxay hagaajinaysaa tayada iyo tirada dalagga.
May iyo Abriil waxay sameeyaan laba buufin. xalalka qashinka ah ee cayayaanka iyo cudurrada.
Marka ugu horeysa waxay ubaahan tahay in la qabto wakhtigii markii burooyinku ay ubaxayaan, labaad - muuqaalka kore ee burooyinkeeda.
Guga, waa lagama maarmaan in la quudiyo Hure, Nitrate iyo ash.
Talo soo jeedin: geedaha dhirta leh cawska ama dhirta, ka dibna qoyaanka ayaa sii dheeraan doona.
Kansarka iyo kansarka madow. Cudur halis ah oo ah fayras fangas. Kiisaska ugu sareeya waxay u saameeyaa geedka on xididka, xididdada iyo miraha.
Waxay muujinaysaa boogaha oilyada marka hore ee jirridda, kadibna xididada. Waxaa sidoo kale jira kiisaska koritaanka. Qaybaha ay saameeyeen cufka xabkaha, iyo booguhu ma noqdaan kuwo u baxda.
Daaweyn: Marka hore, qaybaha ay dhibaatadu saameysey - jilif waxyeello, caleemo, iyo miro - ayaa laga saaraa oo gubay meel ka baxsan beerta.
TALO: Qaybaha qaybta la gooyey ku qabo mindi fiiqan, qabashada nudaha qayb ahaan caafimaad qabta, maadaama cudurka infakshanku aanu si deg-deg ah u muuqan oo cudurku mar kale soo noqonayo.
Daaweynta badanaa macneheedu waa nadiifinta iyo nabarrada jeermiska: 2% xalinta fitamiinada buluuga ah waxay soo saartaa meelaha waxyeellada ka soo gaadhay ka dib marka laga saaro aagagga cudurka qaba, ka dibna lagu maydho decoction beerta.
Miro miraha. Inkastoo xaqiiqda ah in Bryanskoye uu yahay mid difaaca jidhka, kala duwanaanshahan ayaa si gaar ah ugu nugul infekshanka leh kallana miro.
Ilaha infekshanku waa miraha sannadkii hore, oo la daboolay caaryada oo aan laga saarin xilliga geedka hoostiisa.
Ka dib marka infekshinka, waqtiga fruiting, waxaa jira dufan weyn oo ah miraha aan weli gaarin buuxda bislaan buuxa.
Kalkaal markii hore wuxuu sameysmaa yar yar oo bunni ah, oo ugu dambeyntii ku faafay dhamaanba tufaaxa.
Daaweyn: Waa sahlan tahay in lagu dabaqo tallaabooyinka ka hortagga ah ee daaweynta.
Ka dib kasta oo fruiting, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh u nadiifiso beerta, oo laga reebo suurtogalnimada in miraha aan la qallibin.
Miraha khafiifka ah ayaa gubanaya. Haddii inta lagu jiro xilliga dhirta ee miraha aan weli laga soo dhicin geedka, calaamadaha cudurku waa la ogaadaa, waa in sidoo kale la goosto oo la gubaa, iyo geedkii tufaaxa lagu daaweeyo qasacada Bordeaux ama bedelkiisa.
Adkeysiga noocyada qolofta: Gabdhaha Pepinchik, Uralets, Hero of Day, Stroyevskoe iyo Rennet Chernenko.
Phyllosticosis Wakiilka keena waa xajmiga musqusha. Waxaa lagu muujiyey dhibco yar oo cawlan, kaas oo, iyada oo aan daweyn, saameyn ku yeelanayso dhammaan caleenta caafimaad leh.
Mushroom overwinters caleemo dhacday, horumarkiisa wuxuu ku kordhiyaa qoyaan badan.
Daaweyn: Burburinta caleemo dhacday ka hor bilawga ah ee cimilada qabow, dhirta lagu buufiyo xal shan boqol oo ah HOL inta lagu jiro ubaxyada iyo sidoo kale dayrta.
Mashiinka la soo celiyay waxaa la sameeyaa kaddib marka la dhammeeyo ubax. Haddii ay dhacdo in la ogaado cudurku horayba u saameeyay geedaha, caleemaha bukaanku way jajabaan oo gubaan, tallaabooyinka waa isku mid.
Ha iloobin cayayaanka beerta. qaado tallaabooyin ka hortag ah oo ka dhan ah sapood, aboor ku, aboorka tufaaxa, silkworms iyo caws iyo goosashadaada had iyo jeer waa inay noqdaan.
Noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa Bryansk waxay leedahay tiro ku filan oo faa'iido leh, oo ay ku jiraan miro-galka sannadlaha ah, badanaanta dalagga iyo qanjidhka daryeelka.
Gaar ahaan waa ku habboon yihiin gobolladaas oo ay roobabku qabow yihiin.
Laakiin waxaa sidoo kale jira khasaare weyn oo ka mid ah this breeding find: geedka tufaax ma u adkaystaan ​​kallana miro, sidaas darteed waxay u baahan doontaa fiiro gaar ah si goynta sanadlaha ah ee miraha aan habooneyn.